January 2021 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
guuleed	 Jan 31, 2021 0
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 19-06–1442…
Waxaad halkaan kala socon kartaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacada islaamiga ah ee Alfurqaan. Maanta waa Axad, Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 18-06-1442 oo waafaqsan 31-01-2021, Warka Duhurnimo waxaa soo jeedinaya…
Waxaad halkaan kala socon kartaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacada islaamiga ah ee Alfurqaan. Maanta waa Axad, Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 18-06-1442 oo waafaqsan 31 -01- 2021, Warka subaxnimo waxaa soo jeedinaya…
guuleed	 Jan 30, 2021 0
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Caawa waa Axad Taariikhda hijriguna waxay ku beegan…
Waxaad halkaan kala socon kartaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacada islaamiga ah ee Alfurqaan. Maanta waa Sabti, Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 17-06-1442 oo waafaqsan 30 -01- 2021, Warka duhurnimo waxaa soo…
Waxaad halkaan kala socon kartaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacada islaamiga ah ee Alfurqaan. Maanta waa Sabti, Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 17-06-1442 oo waafaqsan 30 -01- 2021, Warka subaxnimo waxaa soo…
Dhegeyso Warbixin Dowladda federaalka oo ku fashilntay in ay ardayda uga jawaabto Su’aalo adag…
guuleed	 Jan 29, 2021 0
Dowladda Federaalku waxay ximabarsan tahay Manhaj wax wax barasho oo Shisheeye kaasoo loogu tala galay in lagu shubo Maskaxda dhalinayrada Soomaaliyeed si ay u noqdaan kuwa aan shisheeyaha Cadaw Cadaw Diineed iyo mid wadanba u aqoon.…
Sheekh Nuur Macalim Cabdiraxmaan oo ka digay ka qeybgalka Doorashooyinka.(Maqal)
Shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa qorsheynaya in la qabto doorasho xiligaan aanan heshiis lagu ahayn hannaanka ay udhacayso. Sheekh Nuur Macalim Cabdiraxmaan oo kamid ah cullimada diinta islaamka ee aad looga yaqaanno gudaha dalka…
Waxaad halkaan kala socon kartaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacada islaamiga ah ee Alfurqaan. Maanta waa Jimco, Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 16-06-1442 oo waafaqsan 29 -01- 2021, Warka subaxnimo waxaa soo…
Kenya oo 8 Askari looga dilay jubbada Hoose.
Xaraada shabaabul mujaahidiin ayaa Shalay qarax Khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac leh geystay ka fulisay Gobalka Jubada hoose. Qaraxaan oo ahaa mid xooggan ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo ay wateen ciidamo ka tirsan Dowladda Kenya ee…